कथा : विचलन – MySansar
Posted on November 19, 2016 November 20, 2016 by mysansar
दिलमायाको मन पोलेको पोलै थियो। माथि के भइसक्यो आमै चाहिँ खुश्बुको रट लगाको लगाकै थिइन्। बूढी सिंढीमा पुग्दानपुग्दै उनी फुत्त बाहिर निस्किन् र उँभो हेरिन्। झ्यालमा पर्दा टम्म मिलेको थियो। उनलाई पसेर दुईटैलाई बेस्सरी भकुर्न मन लाग्यो। तर सोचेर बस्ने समय थिएन। टोलै थर्किने गरी कराइन् -“ए भान्जा ! ए रमेश भान्जा !! हैन किन नसुने झै गर्‍या हँ !!! दिनभरि ढोका थुनेर बसिरहने, तल झर्नु पर्दैन ?”
त्यति नै बेला खुश्बु दौडँदै आइपुगी। चुलबुले आँखाले आमाछोरालाई हेरेर छक्क पर्दै भनी, के भयो आन्टी ? कोरियाबाट अङ्कलको फोन छ। होल्डमा हुनुहुन्छ, छिटो आउनुस्। (पहिलो पटक प्रकाशित : Dec 27, 2008)
[तपाईँ पनि आफ्ना कथा माइसंसारमार्फत् बाँड्न चाहनुहुन्छ भने पठाउनुस् [email protected] मा]